Philippe Coutinho Oo Ka Baxay Aamusnaantii, Finalka Champions League, Mustaqbalkiisa & Arrimaha Xiisaha Leh Ee Uu Ka Hadlay - Gool24.Net
Philippe Coutinho Oo Ka Baxay Aamusnaantii, Finalka Champions League, Mustaqbalkiisa & Arrimaha Xiisaha Leh Ee Uu Ka Hadlay
Kubbad-sameeyaha reer Brazil ee khadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich ee Philippe Coutinho ayaa ka baxay aamusnaantii waxaanu ka hadlay arrimo badan oo shaqsiyan saamayn ugu leh, mustaqbalkiisa iyo ciyaartiisana ku saabsan, waxaanu hoosta ka xarqiiqay in fursadda ugu weyn ee gaarka ah ee uu haysto waqtigan ay tahay inuu ku guuleysto tartanka Champions League.
Coutinho qayb ka ah Bayern Munich oo uu kula joogo amaah uu ugaga soo wareegay Barcelona, waxa uu laba gool ka dhaliyey kooxdiisii hore kulankii ay 8-2 ku badisay Bavaria, waxaana marka uu tartankani soo dhamaado Axadda uu u xidhxidhan doonaa inuu iskaga baxo Jarmalka maadaama la gaadhay waqtigii uu dib ugu laaban lahaa kooxdiisa hore.
Philippe Coutinho oo lala xidhiidhinayo Arsenal oo haddii uu tago uu kula midoobo doono xiddigo reer Brazil ah oo ay ka mid yihiin Willian iyo David Luiz, waxa uu iska diiday inuu ka hadlo arrimaha mustaqbalkiisa, waxaanu ku adkaystay in dareenkiisu uu kaliya kusii jeedo kulanka finalka.
Laacibkan oo la weydiiyey waxa maskaxdiisa ku jira
“Maxkaxdaydu kaliya waxay kusii jeeddaa tartankan. Waa fursad gaar noo ah, aad ayaanan ugu faraxsanahay inaan finalka Champions League imaaddo.” Ayuu yidhi Coutinho oo wax laga weydiiyey haddii uu waqtigan kasii fikirayo mustaqbalkiisa.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu raaciyey: “Mustaqbalkayga wali kamaan fikirin, sababtoo ah waxa kaliya oo aan fikirayaa finalka.”
Coutinho waxa kale oo uu ka hadlay finalka Champions League oo ay ku ballansan yihiin PSG, waxaanu yidhi: “PSG waa koox aad u xoog badan oo dhab ahaantii haysata weerar xawaare dheereeya. Xataa ma sharrixi karayo sida uu ciyaartoy wanaagsan u yahay Neymar, sababtoo ah, dunida oo dhan ayaa og. Waxa kale oo ay dhisteen difaac adag, waxaanay noqon doontaa ciyaar fiican iyo final wanaagsan.”